Uhlelo lwe-AWS lwe-Bottlerocket lweziqukathi | Kusuka kuLinux
Uhlelo olusha lwe-AWS lwe-Bottlerocket lweziqukathi
I-AWS (i-Amazon Web Service), ipulatifomu lamafu we-online sales giant ingenye yamandla amakhulu, ethola indawo futhi ehola ngokumelene nabanye njengeGoogle Cloud, IBM noma iMicrosoft Azure uqobo. Futhi le nsizakalo enhle, njengomncintiswano, isebenza sibonga iLinux.
Kepha ngukuthi ngaphezu kwalokho, AWS manje isithuthukise futhi yakhipha uhlelo lwayo lomthombo ovulekile lokusebenzisa iziqukathi kumishini ebonakalayo nakwinsimbi engenalutho (ngqo kwi-Host). Iphrojekthi ibilokhu ikhona obizwa ngeBottlerocket futhi kusekelwe kwiLinux, kunjalo. I-distro eza ukuqhubeka noma ukufaka esikhundleni sephrojekthi ye-CoreOS engasasebenzi (noma i-Container Linux).
Uma ungazi ukuthi yini iCoreOS, ngiyakumema Funda kabanzi imininingwane ngale phrojekthi ethokozisayo engikhulume ngayo nakwiLxA. Futhi okuvela ukuthi, ngasendleleni, ezinye izakhi ezaziwayo ...
Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo luzothuthukiswa, futhi kuzokwenzeka zama manje ku-Amazon Umshini Wezithombe ze-EC2 futhi ngokunwetshwa ngaphansi kwe-Amazon EKS futhi. Kodwa-ke, kusesigabeni sokuqala sokuhlola ngakho-ke kuzothatha isikhashana ukubona ukuthi yini le Bhodlela elikwaziyo ngempela. Vele, lapho usebenza neziqukathi, kuzosekela izithombe nezithombe ze-Docker ezihambisana nefomethi yesithombe se-Open Container Initiative.
Inkampani yethule lo msebenzi ngokubambisana nabalingani abaningi kubaluleke kakhulu, njenge-Alcide, i-Armory, i-CrowdStrike, i-Datadog, i-New Relic, i-Sysdig, i-Tigera, i-Trend Micro ne-Waveworks. Ngalaba bazakwethu nangemuva kwengqalasizinda ye-AWS, uqinisekile ukuthi uzophumelela futhi ulethe izinto ezijabulisayo ezinsizakalweni zamafu ezinamandla zase-Amazon.
Uma unentshisekelo kuphrojekthi ye-Bottlerocket futhi ungafuni nje ukuyizama kusuka ku-AWS, kepha ufuna ukufunda kabanzi futhi ubone ikhodi yomthomboKufanele wazi ukuthi unawo kulesi sixhumanisi, esisesizeni esisemthethweni se- le phrojekthi isingathwe kwiGitHub.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Uhlelo olusha lwe-AWS lwe-Bottlerocket lweziqukathi
Abathuthukisi abanesibindi bamemezele umsebenzi ku-anti fingerprint feature
IFirefox 75: shayela isigaba sokuthuthuka ngezindaba